February 2019 – Page 2 – Kichuu
Oromiyaa: Bulchiinsi Mootummaa naannoo Oromiyaa, bulchiinsi Mootummaa Federaalaa dr Abiyis Finfinneen kan Oromoo ta’u haa mirkaneessan. OMN MARII FINFINNE IRRATTI ODP LABSA BASEE february 23/2019 „Goonkuma nabsee ta‘a male Finfinneerratti waldhiisuun hinjiru“ Harmee Oromootu akkas [Read More]
Ethiopia: The Present and the Future Prognosis… Note from webmaster: this article is a must-read It is the perspective of a Somali who grew up in Ethiopia, who sees both the enormous potential of Prime [Read More]
Jaal Goolicha Dengee fi Jaal Marroo Dirribaa Galatoomaa! Damee Boruutin, Guraandhala 23, 2019 Baga shira diina injifannoon irra aantan. Baga ayyaanni Uummata Oromoo irra isin dhaanse. Summii isiniif qophaawe warra baatee isini itti dhufteef haa [Read More]
WBO MOORAATTI GALCHUU DURA MARII BAL’AA BARBAACHISA Berhanuu Hundee, Guraandhala 23, 2019 Nagaa fi tasgabbii uummata Oromoo eegsisuuf akkasumas Oromiyaa jeequmsa keessaa baasuuf, WBOn bosona keessaa bahee; gara uummata isaatti deebi’ee; humna addaa Oromiyaa akka [Read More]
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 22, 2019 SBO GURRAANDHALA 22, 2019. Oduu, Miidhaa waraanni mootummaa EPRDF Gujii Bahaa keessatti geggeessaa jiru irratti gaaffii fi deebii ummata naannoo waliin taasisamee fi marii Obbo Lubee Birruu waliin [Read More]
Ethiopia inaugurates model water supply and waste management project in Oromia Region This project can provide sufficient clean drinking water and sanitation facilities to the population of the Welenchiti town and surrounding rural areas for [Read More]